Mgbe ụfọdụ mgbe ị na-edezi ị videos, nwere ike ị chọrọ tinye ụfọdụ ndepụta okwu na videos ma n'ihi na mma-erute pụtara ma ọ bụ na-eme ka videos ọzọ ahaziri.
E nwere ọtụtụ sobtaitel ngwaọrụ nke nwere ike inyere gị aka tinye ma dezie video ndepụta okwu. N'okpuru ebe a bụ ndepụta nke kasị mma 10 sobtaitel editọ maka video edezi. Nwere anya na-enweta oké sobtaitel ngwaọrụ tinye ihe fun n'ụlọ gị nkiri Ndinam.
1. Ndepụta Okwu Workshop
Ndepụta Okwu Workshop a na-ewere na-kasị mma free sobtaitel edezi ngwá ọrụ na onye ọrụ-enyi na enyi interface. Ya nke ọma-akwado ndị niile na-ewu ewu sobtaitel formats dị ka ịnyịnya ibu, DKS, SCR, sub, wdg wezụga ya, ọ enye gị ohere ike, dezie na tọghata ndepụta okwu na ala. Ke adianade do, ya abịa na ụfọdụ elu atụmatụ dị ka anwansị ego, video preview, wdg ndị a na oké atụmatụ na oké ọsọ na kwụsiri ike, na Ndepụta Okwu Workshop-ewe ọtụtụ obere oge dezie ndepụta okwu na natara n'ụwa nile awarding. Rịba ama na ọ kwekọkwara Windows Vista.
Jubler bụ a ederede dabeere sobtaitel edezi ngwá ọrụ. Ọ nwere ike ma na-eji ike ọhụrụ ndepụta okwu ma ọ bụ na-agbazi, nụchaa, gbanwee na tọghata ẹdude ndepụta okwu. Dị ka Ndepụta Okwu Workshop, Jubler na-akwado niile mgbe sobtaitel formats. Nke a free sobtaitel nchịkọta akụkọ na-abịa na njikarịcha algọridim-enyere gị aka idozi oge nkwekọ. E wezụga, i nwere ike kpamkpam ịtọ ndepụta okwu na agba, ego nsupe, họrọ translation mode, wdg Tupu-azọpụta ndepụta okwu, ị nwere ike nwalee ndepụta okwu iji MPlayer. Jubler nwere ike na-arụ ọrụ na Windows, Mac na Linux.
SubtitleCreator bụ a free sobtaitel nchịkọta akụkọ na-ahapụ gị tinye ndepụta okwu gị DVD. Ọ nwere ike tọghata ascii dabeere SRT ma ọ bụ sub faịlụ ederede ka ọnụọgụ abụọ SUP Ọkpụkpọ na-enyere gị aka agbanwe agba nke ẹdude ndepụta okwu. Ọ na-abịa na-inbuilt DVD authoring Ọkachamara ọrụ, nke-enye gị ohere ka ịgbakwunye ọhụrụ ndepụta okwu ka a na mbụ depụtaghachiri DVD. Ndị ọhụrụ version akwado Karaoke.
4. Open Ndepụta Okwu Editor
The free sobtaitel nchịkọta akụkọ dị mfe iji. Video edezi na sobtaitel edezi ọrụ dị ka ndepụta okwu translation, video resyncing, ndepụta okwu na-agbakwunye na wepụ, wdg na-nyere. Ị nwekwara free ịgbakwunye ọhụrụ ndepụta okwu ọ bụla videos.
SubMagic bụ a free ma dị ike video sobtaitel ngwá ọrụ. Ị nwere ike kpamkpam tọghata, dezie ma welie video ndepụta okwu. N'akụkụ, ndepụta okwu translation ọrụ a na-nyere.
6. iToolSoft Movie Ndepụta Okwu Editor
iToolSoft Movie Ndepụta Okwu Editor bụ kacha sobtaitel nchịkọta akụkọ na nza nke nhọrọ maka edezi ndepụta okwu. A na usoro a ọdịda site softonic.com na software.informer.com maka ọcha software (Ọ dịghị nje, Ọ dịghị Adware, Ọ dịghị spyware)
Dezie nkiri ndepụta okwu
Na-akwado maka na-eme ka ndepụta okwu n'ime film
Mee ndepụta okwu ọzọ iche site n'ịgbanwe bit ọnụego na mkpebi ruru.
Dezie nile di iche iche nke ntọala maka ndepụta okwu ntụgharị dị ka typeface, ụcha, na ọnọdụ.
7. Pop Ndepụta Okwu Editor
Pop Ndepụta Okwu Editor bụ nnọọ mfe na-eji ngwá ọrụ dee ma tinye ndepụta okwu ọ bụla nkiri format dị ka WMV, MPEG, AVI ma ọ bụ QT video faịlụ.
Dezie ndepụta okwu mgbe Michael nkiri
Hazie font ịke, font size, font na agba na ọnọdụ nke ndepụta okwu na ihuenyo.
One-click nkiri ọgbọ ndepụta okwu
8. Video Ndepụta Okwu Editor
Video Ndepụta Okwu Editor bụ ịmụta ngwá ọrụ dezie ndepụta okwu maka fim na TV na-egosi nnọọ mfe na rụọ ọrụ nke ọma.
Ike ma dị mfe na-eji interface.
Nkwado nta ọ bụla video formats dị ka iPod, WMV, DivX, AVI, MPEG, XviD, MP4, RM, 3G2, MOV, MPEG-4, wdg
Dezie nkiri ndepụta okwu na customization nhọrọ dị ka font ịke, font size, font na agba na ọnọdụ nke ndepụta okwu na ihuenyo.
Na-akwado maka converting fim na videos fim na elu àgwà na ngwa ngwa ọsọ site na otu usoro ọzọ na
Nwere ike ibelata ibu video n'ime nta obere vidiyo
Ahịa: $ 149
Womble EasySub bụ a sobtaitel nchịkọta akụkọ na ngwá ọrụ DVD.
Na-akwado maka eke, edezi na ijikwa sobtaitel ederede n'ime DVD video faịlụ.
Ọ nwere ihe agbakwunyere video ọkpụkpọ maka edezi sobtaitel na ị na-elele utịp ke realtime.
Real oge preview na-enyekwara mekọrịta sobtaitel na olu nke.
Na-akwado maka importing ẹdude sobtaitel faịlụ na mgbe ahụ ịgbanwe ya dị ka shifting oge ma ọ bụ mgbanwe asụsụ.
Na-akwado na-ede sobtaitel ka DVD.
Aura Video Editor bụ a zuru-apụta na mfe na-eji video nchịkọta akụkọ na wuru na sobtaitel nchịkọta akụkọ.
Dọrọ na dobe video edezi
Na-akwado maka agbakwunye ndepụta okwu ka fim ma ọ bụ videos.
Hazie ndepụta okwu dị iche iche na mmetụta dị ka i nwere ike ịgbanwe font ụdị, na agba na ọnọdụ nakwa dị ka mgbanwe mmetụta.
Real oge preview-ahapụ gị na-ahụ gị video tupu azọpụta video na ahaziri mmetụta.
top 20 4k na akwụkwọ ahụ aja maka kọmputa, smart igwe na ipad
AC3 Files-adịghị arụ ọrụ na OS X Mavericks?
> Resource> Video> Top 10 Ndepụta Okwu Editor Ngwaọrụ n'ihi Your Video edezi